UMbhishobhi Vikinduku Mnculwane.
‘Angikaze ngiphuphe ngisho ngilele ukuthi ngiyoke ngibe nguMbhishobhi waseSheshi weSifundambhishobhi saseZululand. Bengihlale ngizibona ngiwumfundisi wesifundamphristi nje kodwa uNkulunkulu unezindlela zakhe,’ kusho owayengumfundi wakudala waseUKZN, uMbhishobhi Vikinduku Mnculwane.
Ekhula eMtshezi, KwaZulu-Natali, uMnculwane washeshe wangena ebandleni kanti kwathi ngonyaka wezi-1987 wavuma ubizo, wase eya ekolishi lobufundisi eMpumalanga Kapa eyoqeqeshelwa ubufundisi.
Wethweswa i-Master of Theology Degree in Systematics ngowezi-2003, wethweswa i-Doctor of Administration ngowezi-2016. Ekhumbula izinsuku zakhe esafunda, uMnculwane uthe: ‘Izeluleko engazithola kumuntu owayengeluleka ngocwaningo lwami zisahleli engqondweni yami namanje. Ngangikuthakasela uma sihlangene ubuso nobuso nokwelulekwa ngezinye izindlela zokwenza ucwaningo ezingeyeme ekuqaleni ngokubeka lokho okudinga ukugcwaliswa wucwaningo.’
UMnculwane useke waba sezikhundleni zobuholi ezehlukene okubalwa kuzona ukuba nguMqondisi woPhiko Lwamagugu eHhovisi likaNdunankulu waKwaZulu-Natal, iBamba leSikhulu eSiphezulu saMafa AkwaZulu-Natal, esiyaziwa ngeKZN Amafa and Research Institute.
UbenguMphathisifundamphristi wase-St Augustine’s eMlaza, eThekwini, lapho ebekhona ngenkathi eqokelwa ukuba nguMbhishobhi waseSheshi wesiFundambhishobhi saseZululand esinamabandla angama-283 ezindaweni zasemakhaya okubalwa iShowe, iMpangeni, KwaNongoma, iFilidi neNquthu kuzona, ezinabafundisi abangama-47, abafundisi abali-16 nabadiyakhoni abane.
Njengomalusi umsebenzi kaMnculwane kuzoba kungukushumayela nokufundisa ngeVangeli nokuqhakambisa imfundiso yebandla eqondile.
Ebuzwa ngombono anawo ngeSifundambhishobhi, uthe: ‘Uma ungumholi umbono uwenza nabantu obaholayo.’
Uthi ibandla kudingeke ukuthi lishintshe ukuze likwazi ukubhekana nezinselelo zobhubhane lweCOVID-19 ngokuqhamuka nezindlela ezintsha zokwenza izinto okukhona ukusakaza ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje kuzona.
UMnculwane ubonge bonke abamkhethile kulomsebenzi onzima, wabonga isifundamphristi sase-St Augustine’s nabantu bakhona ngokumfundisa izinto eziningi. ‘Impela ngibusisekile futhi nginenhlanhla!’